You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»‘Ndaoneswa chitsvuku’
By Munyori weKwayedza on	 November 10, 2017 · NHAU DZEKUMATARE
‘‘Handisisina rugare, iye nehama dzake vanouya kuzondituka pamba pangu. Izvozvi akasungisa mwana wangu ari kujeri kutaura kuno apa ave kuunza zvikomba pamba pemwana wangu. Zviri kundirwadza izvozvo,” vanodaro vamwene ava. Jepa anopikisana nemashoko avamwene vake achiti: “Amai vanonyepa, ini handitombovashungurdze uye handiende kumba kwavo.
‘‘Murume wangu akambotiza kumba akaenda kuna amai vake, ndakangotevera ikoko mwana arwara. “Amai vakanditi ndibve pamba pavo vachinditi hapana chipatara ini ndikabva ndichisiya murume ari kumba kwavo.
‘‘Hama dzangu dzakapindira dzichida kutigadzirisa ini nemurume, kwete zvavari kutaura izvi. Murume wacho izvozvi akasungwa, ari kujeri.”